Septambra 21, 2009 amin'ny 1:18 am
Noho izany dia tsy maintsy hoe Screenshot aho no nanampy rehetra nandika Site fikarohana rehetra toy ny
Ny fomba hanatsarana ny Fifamoivoizana be?
* Cache rehetra Site (satria milina fikarohana-dont toy izany mba hiandry ny votoaty).
* Ampiana ao amin'ny fandikan-teny isan-tokony ny fikarohana.
* Andraso ny 6-10 Day ny ho nirakitra anarana, ary ny iray hafa 4-5 Andro ho an'ny fikarohana vokatra
Oktobra 5, 2009 amin'ny 7:26 am
Nanandrana ankehitriny. Very tsara plugin. Misaotra betsaka !
Oktobra 7, 2009 amin'ny 12:38 aho
Izany no tsara plugin fa manana fanontaniana. Raha misy io dia voadika lahatsoratra no kopian'ny voadika atao ny lahatsoratra vetaveta tao amin'ny toerana?
Efa nampiasa Global Mpandika ary fivarotana rehetra, ary fandikan-teny ho azy ireo indexable amin'ny Google.
Nahazo be dia be ny fifamoivoizana ny olona mitady ny teny fanalahidy amin'ny fiteny.
Oktobra 8, 2009 amin'ny 11:05 am
Raha tsorina dia eny, fandikan-teny dia voatahiry ao amin'ny toerana, ary dia Google indexable (rfa)
raha ny marina, dia tsy voahozongozona kokoa ny andinin-teny sy ny fanazavana fiovana noho ny hafa Plugins izay fantatro